Amabali EBhayibhile: Ityholo Elitshayo - IWebhsayithi Esemthethweni YamaNgqina KaYehova
UMOSES wayehambe indlela ende ukuza entabeni yaseHorebhe ukuze azifumanele ingca izimvu zakhe. Wabona ityholo lisitsha kodwa lingade liphele!
‘Ngummangaliso lo,’ wacinga njalo uMoses. ‘Makhe ndisondele ndibone kakuhle.’ Ekusondeleni, kwaphuma ilizwi etyholweni, lisithi: ‘Musa ukusondela. Khulula iimbadada zakho, kuba umi kumhlaba ongcwele.’ YayinguThixo owayethetha ngengelosi, ngoko uMoses wabuﬁhla ubuso bakhe
Wathi ke uThixo: ‘Ndizibonile iintsizi zabantu bam eYiputa. Ngoko ndiza kubakhulula yaye ndithumela wena ukuba ukhokele abantu bam baphume eYiputa.’ UYehova wayeza kuzisa abantu bakhe kwilizwe elihle laseKanan.
Kodwa uMoses wathi: ‘Ndingubani na mna? Ndingayenza njani le nto? Kodwa ke masithi ndiyaya. AmaSirayeli aya kuthi kum, “Uthunywe ngubani na?” Ndothini na ke mna?’
‘Wothi,’ uThixo waphendula. ‘“UYEHOVA uThixo ka-Abraham, uThixo kaIsake, uThixo kaYakobi, undithumile kuni.”’ Waza wongezelela uYehova wathi: ‘Ligama lam elo ngonaphakade.’
‘Kodwa masithi abakholwa xa ndisithi undithumile,’ waphendula ngelitshoyo uMoses.
‘Yintoni na esesandleni sakho?’ wabuza uThixo
UMoses waphendula: ‘Yintonga.’
‘Yiphose emhlabeni,’ watsho uThixo. Yaye xa wayiphosayo uMoses intonga yaba yinyoka. Emva koko uYehova wabonisa uMoses omnye ummangaliso. Wathi: ‘Khawufake isandla sakho kwisambatho sakho.’ UMoses wasifaka yaye ekusikhupheni kwakhe sasimhlophe njengekhephu! Isandla saba ngathi sithwaxwe sisifo esoyikekayo seqhenqa. Emva koko uYehova wanika uMoses amandla okwenza ummangaliso wesithathu. Ekugqibeleni wathi: ‘Ekuyenzeni kwakho le mimangaliso amaSirayeli aya kukholelwa ukuba ndikuthumile.’
Emva koko uMoses wagoduka waza wathi kuYitro: ‘Khawundivumele ndibuyele kubazalwana bam eYiputa ndibone ukuba baphila njani na.’ Ngoko uYitro wathi ndlela-ntle kuMoses, waza uMoses waqalisa uhambo lwakhe olubuyela eYiputa
Eksodus 3:1-22; 4:1-20.
Liyintoni igama lale ntaba ikulo mfanekiso?
Chaza into engaqhelekanga eyabonwa nguMoses xa wayesalusa izimvu kule ntaba.
Lalisithini ilizwi elaphuma kwityholo elitshayo, yaye yayilelikabani?
Waphendula wathini uMoses xa uThixo wamxelela ukuba uza kukhokela abantu Bakhe ekuphumeni eYiputa?
UThixo wathi makathini uMoses xa abantu bembuza ukuba uthunywe ngubani?
UMoses wayeza kubonisa njani ukuba wayethunywe nguThixo?
Funda iEksodus 3:1-22.
Amava kaMoses asinika njani intembelo yokuba kwanokuba siziva singakufanelekeli ukuphumeza isabelo sobuthixo, uYehova uya kusixhasa? (Eks. 3:11, 13; 2 Kor. 3:5, 6)
Funda iEksodus 4:1-20.
Satshintsha njani isimo sengqondo sikaMoses ebudeni beminyaka engama-40 awayichitha kwaMidiyan, yaye banokufunda ntoni koku abo bazabalazela ukufanelekela amalungelo angakumbi ebandleni? (Eks. 2:11, 12; 4:10, 13; Mika 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)
Kwanokuba siyaqeqeshwa nguYehova ngentlangano yakhe, unokusiqinisa njani umzekelo kaMoses? (Eks. 4:12-14; INdu. 103:14; Heb. 12:4-11)